Astaamaha Lagu Garto Gabadha Wanaagsan |
Ilhaan Ciise Maxamed, June 15, 2019
Waa Maxay Maareynta Wakhtiga?
Maxamuud Axmed Muuse — October 10, 2019
Waxaa jira hablo aad u wanaagsan oo ku sifoobay diin, akhlaaq, xishood, karti, howl karnimo, oolimaad dheer, debecsanaan, dhowr sanaan, afgaabni, tixgelin, dad la dhaqan wanaagsan, iyo u deg degidda xuska Alle. Sidoo kalena waxaa jira intaas in lid ku ah. Haddaba si aad u garato, waxaad ku garan kartaa qodobadaan soo socda;- Waxay ku asturantahay gurigeeda kama soo baxdo, waa qof ku sifowday maqbiyo. Waxay leedahay diin, waxay u deg degtaa kheyrka, mana jirto meel aan goob cilmiyeed ahayn ey aado.Waa qof xishood badan, afgaaban, aan waxay doonto ku hadlin.
Waxay leedahay aqoon diineed, mid cilmi waxaase asal u ah diinta islaamka oo ay jeceshahay. Mar walba waxay jeceshahay in ay raacato, ayna barato diinta islaamka, kama baxdo masaajidda iyo meel kasta oo lagu qayb sanaayo dhaxalka Nebiga (NNKH).Waa gabar aan suuqyadda wareegin, ku sugan gurigeeda. Ma qeyliso, mana ahan dumarka markay guriga jooga codkeeda laga maqlo xaafadaha la deriska ah.
Waxay xirataa kuna asturantahay xijaabo adag, jirkeeda oo dhanna qariyay, aan waxba laga arag. Marka ay soconayso jidadka lama hadlaan dadka caloosha ka buka oo sheydaanku ku dhex milmay. Ma aado xafladaha lagu tunto iyo goobaha ay isugu yimaadaan abkay ibliis oo dhan. Hadday baxdo waxay ku baxdaa amar ay ka qaadato waalidkeeda.
Waa qof addeecda waalidkeeda, maqasha, udhego unugul.Waa mid la jecelyahay dadka ahlu kheyrka ahi dhammaantood farta kuwada fiiqaan, kuna si fowday wanaag oo dhan.Waa qof har iyo habeen ku werdida qowlka Alle.Waa qof cibaado badan, mar walba oo aad aragto waxay ku dhex jirtaa wanaag, cisi, karaamo iyo Kheyrka Alle oo badan.Waa qof karti rabbi ku manaystay, howl kar ah, shaqo badan, inta badan waqtigeeda u maaraysan yahay. Waa qof nadaafad jecel, dharkeeda, jirkeeda, guriga iyo fagaagiisa waxay ka dhigtaa mid nuurad ah, saafi ah, saxar la’, aan qashin laga heli karin soonaha guriga, waxayna aamin santahay xadiiskii ka sugnaaday suubanaheenii (NNKH), (Nadaafaddu waa iimaanka barkiisa).
Waxay mar walba dadka ay ugu yeertaa wanaaga, kheyrka, waxayna ka reebtaa xumaha oo dhan. Waxay ilaalisaa dhaqanka islaamka, midka suuban ee ay bulshadeedu haysato. Ma ahan beenlowad, ma sheeko badna, ma ahan dadka suuqyadda wareegga oo wararka faafiya iyo kuwa dadka isku dira oo kala geeya dadka isku wanaagsan, qoyska degan, saaxiibo isku xeel dheer, bulsho wada taalay IWM.
Waxay mar walba ka fekertaa qoyskeeda, wayna jeceshahay, waxay ciso iyo ixtiraam u haysaa waalidkeed, waxay utahay baariyad, addeecda, hadalkooda maqasha. Waxay qaadataa wixii ay kula taliyaan, waxayna isaga hartaa wixii laga reebay oo dhan. Mar walba waxay la socotaa dadka wanaagsan, ahlu kheyrka ah, xishoodka badan, dhowrsan oo aan xadgudbin.
Haddii ay nin la sheekeysato waxay ka doorataa kan ugu kheyrka badan, ugu Akhyaarsan, uguna wanaagsan. Ma ku weydiinayso wax aad dhibsato sida dumarka qaar ay dhahaan lacag keen, shoobin baan u baahanahay, waan xanuun sanayaa ee iisoodir lacag aan dawo ku qaato, baarka ina gee iyo biribeyr iigu soo shub. Waxay iska ilaalisaa in ay ninka ay la sheekeysato u raacdo guryaha dadka kale, haddii ay balamaan gurigooda ayay keensataa iyadoo waaridku ogyahay.
Waxaan wanaag ahayna kama aqbasho ninkaas, mana ka yeesho wax xadka ka baxsan.Waxay ka fariisataa meel ka fog ninka, hoosta kama gasho iyadoo aaminsan in shaydaanku mar walba saddexeeye yahay. Waxay ninka usooban dhigtaa reerkooda si ay uga eegaan in uu yahay nin wanaagsan oo akhyaar ah. Gabadha mustaqbalka leh kama yeesho ninka in uu meher xado, meelaan walidkeed joogin ama idan laga haysan in lagu mehersho.Waxay ka fekertaa in ay guursato nin diinleh, kana muuqato sunnada.
Kuma doorato ninka lacag, qurux, nasab balse ay ku doorato diin, ragganimo iyo akhlaaq wanaagsan.Waxaad ku garan cadradda wanaagsan waano joogto ah, mahadnaq badan, xushmad saa id ah, xishood badan, ixtiraam, dhaqan wanaagsan iyo dhowr sanaan.
Waa qof dhowrsan, cafiifad ah iyo ahlu taqi ah.Waa qof dhaqan karta reerkeeda, awlaadeeda.Waa qof xiriirinkarta labada daarood reerka ninkeeda, iyo kan reerkooda. Mar walba ay kula hadlayso waxay kaa waraysan waalidka iyo guud ahaan qoyska. Lama hadasho qof walba, lamana qabsato nin walba, waxay isaga ilaalisaa sida dabka laysaga ilaasho. Waxay adduunka ugu necebtahay beenta, khayaanada, wax isdaba maridda iyo hadalada xun.
Waxay jeceshahay in ay yeelato reer, si ay u kasbato ninkeeda, raaliyana ugu noqoto.Waa barbaariso ubad, waxay jeceshay in ay soo saarto awlaad wanaagsan, kuwaas oo u adeega diinta, dalkooda iyo dadkooda.Waxay soodhaweysaa dadka yimaada guriga, waji farxad leh, deymo wanaagsan iyo hadalo macaan.Waxay mar walba caawisaa dadka tabaalaysan, iyadoo si naxariisleh ula dhaqanta, karaankeedana ku dadaasha.
Waxay mar walba jeceshahay in ay dhibta la qeybsato dadka tabaalaysan, gargaarkana ubaahan. Waxay jeceshahay in ay gurigoodu noqdo hoy lagu soo hirto, akhlaaq iyo wanaag dadka ku sifoobay.Waxay si wacan wax uga taqaan diinta islaamka gaar ahaan, xaqa ninka ku leeyahay xaaskiisa, kan awlaadeeda, kan qoyskeeda, deriska iyo guud ahaan dadka islaamka ah, waa gabar leh fikrado, hal abuur waxku ool ah. Waa qof mar walba aqbasha qadarta Eebbe iyo waxkasta oo dhaca.
Waa qof samir, dulqaad, xilkasnimo ku caan baxday, waa qof aan lahayn wax belwed ah, iyo waxkasta oo maanka dooriya oo dhan, waxna udhima qofka caqligiisa. Dhammaan qodobadaas iyo ka badanba waxay tusaale u yihiin gabadha wanaagsan, iyo astaamaha lagu garto.
Qofka bini-aadamka ah ma dhamaysna, Alle ayaa dhamaystiran, mar walba waxaa haboon in qofka lagu doorto diintiisa. Nebiga (NNKH), waxa uu yiri (Dumarka waxaa loo guursadaa afar:- quruxdeeda, maalkeeda, nasabkeeda, iyo diinteeda, ku dadaal tanta diinta leh gacantu ku boorowdo).
Quruxda: Waa dhammaataa, muddo kadib, qofkuna waa is beddelaa.
Maalka: maalku waxa heli karta masiibo, waa lumi karaa, waa la dhici karaa, waana guban karaa, daad baaba qaadi kara.
Nasabka: Waa la coloobi karaa, waana lakala qixi karaa, colaad baa
imaan karta, waana lakala haajiri karaa.
Diinta: Waxaa nasiib leh wiilka ama gabadha hesha ruux leh diin, iimaan kaamil ah, Alla yaa ka wanaagsan ruuxaa, yaa ka na siib badan, waa dadka diinta isku raaca oo aan isku raacin maal, qurux, magac iyo nasab. Waana qofka uu Nebigu (NNKH) yiri ku dadaal tan diinta u saaxiibka ah.
Maxay ka dheheen dumarka abwaanadu?
Gabaygaan waxaa tiriyay abwaan Cismaan Yuusuf Keenadiid mar uu ka hadlaayay dumarka iyo sida raggu jeclaan lahaa inay ahaato.
Jaadadka Naagaha (Gabay)
Jaadadkoodu waa badan yihiin jamaca naagoode
Raggu johoradduu yahay middii jaahilaan garane
Jidkaan sheegayaa laga gartaa tii inoo jabane
Waa inay jacayl iyo kalgacal kugula joogtaaye
Waa inuu jiraayoo qalbiga jeelku ka hayaaye
Waa inay jaguug lama rabee jilicsanaataaye
Waa inay jiriibbamidda iyo jaaxid ka hartaaye
Waa inayan sina kuu jactadin kuna jurxaynayne
Waa inay jawaabkay tiraa jimic u yeeshaaye
Waa inay la soo jeensataa jaahsan iyo laabe
Waa inuu isjeeqaaqayaa jiirka kiin ahiye
Waa inay jinaadkaa tihiyo jeex naftaada ahe
Waa inaan jinnigu duufsan iyo hadalka jaajuuse
Waa inayan jaanteeda geyn jago aan fiicnayne
Waa inay ka jigataa waqeed jidadka ceebeede
Waa inay jarreerada la tari jeerba gocotaaye
Waa inay ku jeeddaa xilkiyo jahada maamuuse
Waa inayan jaaseysaneyn jeedal iyo laane
Waa inayan joogaha axdiga jebin abiidkeede
Waa inayan soo jiidaneyn jaa’ifiyo hawle
Waa inayan jaaraanka iyo jees wax buu dhimine
Waa inay dad jamaciis ka tahay jaalle kaa xiga e
Waa inay jiilkii daacadnimo kugu jalleecdaaye
Waa inay jirkaagiyo wixii jira malaysaaye
Waa inayan kaa jiijanayn kulana jiiftaaye
Waa inay jamaad iyo xubbi iyo jamasho haysaaye
Waa inay janaan suu ku dhacay kugu jidbootaaye
Waa inay isaga jaadan tahay saad jeclaataba e
Waa inayan juuq oran kolkaad ereyo jeexsiine
Waa inay suldaan jaa’iriyo janan ku mooddaaye.
Sida gabay gaan ku cad, waxa uu abwaanku na tusaalaynayaa waxa laga rabo gabadha iyo in ay ragga u hogaansanaato. Waxa ay jecelyihiin in la addeeco ragga, jaceyl iyo muxubii iyo kalgacal ku salaysan kugu soodhaweyso.Waa inay kugu eegtaa ilnaxariisleh, deymo soojiidasho leh, aragti wanaagsan, hadal macaan, ereyo dubaaqa qaboojiya iyo jamasho ay ku dheehantahay farxad iyo raynrayn.
Dhanka kale abwaanku waxa uu leeyahay waa inay mar walba ku moodaa gabadhu suldaan, janan sidiisiina kugu soodhaweysaa. Marka aad baxayso waa in ay kugu saagootisaa farxad, dhoolacadeyn, salaan diiran, iyo qalbi hufan.Waa inay marka aad imaanayso kugu soodhaweyso hadalo qabow, iyadoo ku ilowsiinaysa daalka yar ee dareemayso. Iyadoo kugu beddelaysa wax aad ku ilowdo. Marwalba oo aad ka maqantahay waa in aad uxiisto, una soo degdegto gurigaaga si aad ugu ilqabowsato xaaskaaga.Waana in ay dareemi karto waxa aad dareemayso iyo waxa aad jeceshahay.
Maah-maah baa ahayd (Dumarku waa saddex, kuuroon, kaaroon iyo isuroon). Markii aad si dhab ah u fiiriso waxay cadeynaysaa in dumarku
kala jaad yahay sida:
Kuuroon: Waa gabar adi mar walba kaa fekerta, nafta kuu hurta iyo sidii aad u noqon lahayd halyay.
Kaaroon: Waa qof aan kuu fiicneyn oo aan marna ka fekerin naftaada iyo waxa kuu wanaagsan.
Isu-roon: Waa qof iyada nafteeda un ka fekerta aan dan ka lahayn wax kale sida ninkeeda, caruurteeda, laba daarood midna kama fekerto waxaan ka ahayn nafteeda.
Soomaalidu waxay dhahdaa ( Sareedada adduunka waxa ugu sareysa waa naag suuban). Gabadhu waxaa asal u ah in ay la haato diin iyo akhlaaq wanaagsan, haddii ay leedahay diin waxaa lagu tilmaamay in ay tahay adduunka waxa yaal in ay ugu kheyr badan tahay.
Alle qur’aankiisa waxa uu ku yiri (Al dunyaa mataacun).
Abwaan Maax ayaa tix ku muujiyay Dumarka tan xun iyo tan wanaagsan. Wuxuuna yiri:
Digta waaga goortii arlada, duul kastaba tooso
Shaqana loo dareeree nafluhu, aado danihiisa
Dayacanta ku daahdee hurdada, aan durbaba toosin
Diihaal iyo adoo gaajo daran dib ula soo laabtay
Duhurkii qadadoon diyaar ahayn, hadday wax doondoonto
Dambaskana dabkii xalay baqtiyay, darif ka afuufto
Doqon moog dahab iyo xariir, diibka lays mariyo
Dushoo bilicsan dumarka, iyagaa loogu dowgalaye
Mar haddaysan dareenkaaga, kicin dooqa himadaada
Dambas jiifta baalida ah, waa dumarka ceebtoode
Dugsi malahan iyo damac loo xishoo, lagu dulqaataaye
Duumo hadishee kuma habana daalli guur wacane
Doqonnimada badan dumarka waa lagu dalaaqaaye
Markii aad dhab ugu fiirsato gabaygaan, waxa aad arkaysaa in abwaanku uu leeyahay naagta aan qadada diyaarin xili hore, aroortii kicin, baali ah, aan nadaafad lahayn, oo aan xishood lahayn iyo doqonimada badan in dumarka lagu dalaaqo. Tani waxa uu udigayaa labo: Dumarka in ay noqdaan dumar howl kar ah, oo adag-adag, gaari dumar ah. Raggana waxa uu uga digayaa in ay dumar oo dhan aysan moodin gaari balse ay jiraan baali iyo goon baar xun.
Mar uu abwaan Cismaan Yuusuf Keenadiin ka hadlaayay dumarka waxa uu yiri:
Naagtii aan ila hayn macnaha had iyo goor noolba
Aan ka hammiyeyn saan jeclahay iguna hawshoonin
Waa igu haddaalmiye inaan hurayo sow ma ahan?
Markale waa tuu lahaa abwaanku isaga oo is bar bar dhigaya naagta
baalida ah, tan gaarida ah, ninka godadlaha ah iyo ninka ragga ah, tix
yar buu ku cabiray wuxuuna yiri:
Guul iyo khasaaruu mid uun guurku lee yahaye
Gabalna waa la eeddaa haddaan loo geyaan dayine
Gaariyo ninkii rag ahi waa gedo heshiiyaane
Godadle iyo goonbaarta xunna yaw garniqi doona?
Markale abwaan Soomaaliyeed isaga oo ka hadlaya in raggu dumarka duunyo badan ka baxsho, oo daar quruxsan u dhiso, aqal daahyo weyna u dhigo, balse sidii uu doonaayay ay noqon weydo.In ay noqoto mid aan xishoon, waxay doonto ku hadasho, oo kugu dhibto wax aadan awood ulahayn, o ay kugu khasabto in aad deyn usooqaato, dahab iyo diinaar ka lusho dalalka adduunka hadba meel ka dejiso.
Isaga oo ku cabiraya gabay, wuxuu yiri:-
Duunyo badan adiga oo duldhigay, oon waxba u diidin
Oo daar quruxsan aqal daahyo weyn, kula dadaalaya
Haddii doorkii xishood dumar lahaa, daalli laga siibo
Wixii dunida yiil dharaar, hadday damac ku soo koobto
Ooy kugu dirqido waxaadan hayn, amase kaa doonto
Iyadoo dantaadiyo taqaan, deyn wax jira maalka
Dollar heliddi deyn guro, hadduu galo dubaaqeeda
Daryeel li’i danaysiga mutuxan reerka dumintiisa
Damac ba’an hadduu galo, sidii nibiri daaqaaya
Dugsi malaha iyo damac loo xishoo, lagu dulqaataaye
Damac iyo hurguri badan dumarka waa lagu dalaaqaaye.
Mar kale abwaanku isaga oo ka hadlaya gabadha sharafteeda iyo waxa
lagu yaqaan. Waxa uu yiri:
Dumar sharaftii waa inay fadhido, deyrka gurigeeda
Mar hadday deyro dhaaf noqoto oy dibedda meermeerto
Gabal dumiyo duhur iyo dharaar, socodka deyn-weydo
Diyaafadaha iyo aroosyada, hadday daanis ka ciyaarto
Dersin dhoocilaah iyo, hadday dumar la saaxiibto
Duruus been ah tii u aqrisaba, daba-guclaynayso
Duq cajuus ah dulunkeed, hadday daacad u ahaato
Mingiskiyo durbaanada, hadday derejo weyn moodo
Diradiraha xaawaley, hadday diiday oran weydo
War doondoonkii naagtii guryaha, kula dul-meereysa
Dugsi malaha iyo damac looxishoo, lagu dulqaataaye
Duumo hadishee kuma habana daali guur wacane
Dumar shirinta iyo naxliga naagaha waa lagu dalaaqaaye.
Markale abwaanku isaga oo ka hadlaya midda diintu ina fartay in aan
guursano, raggooda jecel, raaliyada ah, wuxuu yiri:-
Diinteenu siday tiri sharciga, iyo duugga dhaqankeenna
Dembi waxaan ahayn dumar rag, waa uga dambeeyaane
Waa inaanayn dalabka seygeedu rabo, diidin abidkeede
Dabuubtiisa waa inay durbaba, dood la’aan fuliso
Isagoon dibnaha furrin, waa inay dabac taqaanaaye
Deganaan xishood waa inay indhaha, hoos u dadabtaaye
Dad isjecel dantood waa ismaqal, duugga aayaha’e
Daacufleyda dhegaha daarsatee, diida hadalkaaga
Duco waalid middaan qabine, habaar lagu dambeysiiyey
Duryanleyda dabcigeedu yahay, dooda iyo buuqa
Dudumiyo madax adayg dumarka waa lagu dalaaqaaye
Abwaanku isagoo markale ka hadlaya dumarka uu Illaahay calaf kugu daro,
middaasoo hinaase badan, adoo shaqo ku maqnaa ku dhahaysa xaggee
jirtay iyo naag kale baad la joogtay. Wuxuu yiri:-
Darmaan wacan haddaad guursatee, calafku kuu dooro
Dumar hinaase abid, waa waxay dir u lahaayeene
Adoo howl ku soo daahay, iyo danaha reerkaaga
Danni tuhun warxumo badan, hadday darifka kaa laacdo
Ooy kula dagaashee tiraah, taad ka timid doono
Daacadda hadday diidoo, ood waano kala daasho
Oysan doonayn dumar kale, haddii damacu kuu geeyo
Dibindaabyadana jeceshahooy, taranka kuu diido
Dagaalna ay waddiyo kharash dulsaar, reerka dumintiisa
Ooy masayr daran qabtiyo, cudur aan daawoobin
Hinaasaha kan daran, dumarka waa lagu dalaaqaaye
Markale abwaanku isaga oo ka hadlaya darajada dumarku inay tahay
ubadka, wuxuu yiri:-
Haween derajadood, waa inay daadahshaan ubade
Diintiyo dadkuba, waa duxdii labada daaroode
Seddexdaas daruuriga nimcada, Eebbe nagu deeqay
Dameer wuxuu u daan beeli, waa dir hakaa haro’e
Danta guurka laga doonayana, taran dadweeyaane
Dulucdiyo ujeedada markaan diirka ka caddeeyo
Inkastoy darmaan wacan tahee, dhabanna kaa deeqdo
Dad haddaanayn dhalin iyo, carruur daaradda ciyaarta
Daryeelkeeda waa inay heshoon, xaqa la duudsiine
Damiirkana loo dhowraa si aan qalbiga daano uga gaarin
Hayeeshee hadday dihan la’dahay oo da’ laga waayo
Madhaleys duruuftoodu waa inay kala daneystaane
Dembi malahan oo ubadku, waa deeq Illaah bixine
Diintuna waxay na fari samir dugsada, diidmo iyo siinba
Da’ba haddaysan dhalin, dumarka waa lagu dalaaqaaye.
Mar kale abwaanku isaga oo tilmaamaya in diintu ina farayso in aan ku
duceysano dumarka wanaagsan, daacad ah, raaliyo ah, garasho rabbi
siiyay, duco waarid qabta, dahabo naageed ah, quruxna Alle siiyay,
aragana uroon, ku farxad gelisa markaan deymooto.
Dirka farac waa loo awr dayaa, diintu sey tiriye
Waxaa loo duceystaa, marwada daacadda Illaahe
Waxaa loo duceystaa afadaan, dood xun soo celine
Waxaa loo duceystaa door haween, iyo dahabo naagood
Waxaa loo duceystaa indha deeraley, diinta garanaysa
Lama daayo middii dugufsane, dooqiyo aragu diidaayo
Lama daayo dalbooleyda iyo, daaman sagafleyda
Lama daayo derileyda, aad socodka diin moodo
Lama daayo dufanleyda aan, diib ismarinaynin
Lama daayo digix gaabantiyo, duubi cillinleyda
Waxaad doorataba, dumar midduu Eebbe kula doono
Dadaal lagu mahelo, ee yartii calafku kuu dooro
Daa’imkana nasiibkaaga kuugu daro, duciyo liibaanba
Dul ahaan haddaan xidid xishoon, daawo laga waaye
Doc kastaba hadday kaa maraan, diiratiyo boobto
Daallimnimona ay kula galaan, dhaqanna doorsoomo
Oo seedi deel-qaaf yaqaan, dabarka soo goosto
Degimaayo reer, oo iyagaa loogu dowgalaye
Dembina maleh inantuye, jin baa dumiyay qoyskiiye
Dun-xumaanta xidid, naagaha waa lagu dalaaqaaye.
Abwaanku isagoo la dardaarmaya ragga, wuxuu yiri:-
Ha degdegin dardaaranka murtidu, waa dabuub culuse
Kaamana aan daaline mid baan, kuugu darayaa’e
Diintiyo dhaqankuba waxay diidayaan, dumar hoggaankiise
Waxaan kaaga digay daacatul-nisaa, hadday dunidu ciirayso
Darmaan quruxsan duco qabta, daacad kuu noqota
Dersin ubadah, danabyo hanaqaada, daa’in haku siiyo.
Tags: Astaamaha Lagu Garto Gabadha Wanaagsan
Next post Socod Gaabida Waxay Keentaa Gabow Degdeg ah - Daraasad
Previous post Astaamaha Lagu Dooran Karo Ninka Wanaagsan